ထိုင်းဗိုလ်ချုပ် မြန်မာ့ စစ်တပ်ကို ချီးကျူး
မြန်မာ့ တပ်မတော်အား စည်းကမ်းကောင်းမွန်အောင်၊ စိတ်ဓာတ်ကောင်းမွန်အောင် လေ့ကျင့်ထားရှိမှု့ အပေါ် များစွာအားကျ ဂုဏ်ယူ။
ထိုင်းဘုရင့် တပ်မတော် ကာကွယ်ရေးဦးချူပ် Genearl Tanasak Patimapragorn
7/14/2012 05:22:00 PM
တိုတိုထွာထွာ FaceBook မှာ (၄)
မြန်မာရွာ တစ်ရွာကို ဖြတ်သန်းသွားလာနေတဲ့ စစ်သား အချို့ ( ဂျပန် စစ်တပ်ထင်တယ်)
ကောင်းလိုက်တဲ့ လေယာဉ်ကွင်း ၊ ရှေးခေတ်က လယ်သမားတွေ အဆင်မြင့်တယ်နော်
7/14/2012 05:17:00 PM
yahoo voice service အသုံးပြုသူများ၏ paswword ၄ သိန်း ငါးသောင်းကျော် Hacker တွေ ရရှိထား
D33Ds အမည်ရှိ Hacker တွေ က Yahoo အသုံးပြုသူ ၄သိန်း ငါေးသာင်းကျော်ရဲ့ username နှင့် password တွေကို အွန်လိုင်းမှာ ဖေါ်ပြလိုက်ပါတယ်။Hacker တွေက yahoo က တာဝန်ရှိသူတွေကို မိမိတို့ရဲ့ subdomain ရဲ့ လုံခြုံရေးကို တာဝန်ယူဖို့လိုတယ်လို့ ဆိုပါတယ်.Yahoo server တွေမှာ လုံခြုံမှု့ ကျိုးပေါက်နိုင်တဲ့ အားနည်းချက်တွေ အများကြီးရှိပါတယ်လို့ ဟက်ကာတွေက ဆိုပါတယ်။ Hacker တွေ က SQL injection နည်းပညာကို အသုံးပြုကာ yahoo server ခွဲ တစ်ခု ကို ထိုးဖောက် ပြီး login information တွေ ရရှိသွားတာ ဖြစ်ပါတယ်။Hacker တွေ ရရှိသွားတဲ့ မေးလ်တွေထဲမှာ Gmail နဲ့ အခြားhotmail တွေလဲ ပါတယ်။ Hacker တွေ အွန်လိုင်းမှာ တင်လိုက်တဲ့ မေးတွေကို ဒီမှာ ဒေါင်းလို့ ရပါတယ်။ သူတို့ ရရှိသွာတဲ့ Email အများစုရဲ့ Password တွေ ကို analysis လုပ်ကြည့်ရင် အောက်ကအတိုင်းတွေ့ရပါတယ်. ဥပမာ မိမိpassword ကို 123456 လို့ ပေးထားတဲ့ မေးလ်ပေါင်း ၁၆၆၇ ရှိပြီး iloveyou လို့ပေးထာားတဲ့ မေးလ်ပေါင်း ၁၄၀ ရှိနေပါတယ်။
123456 - 1667
welcome - 437
ninja - 333
123456789 - 222
12345678 - 208
1234567 - 106
မှတ်ချက်။ အင်တာနက် အသုံးပြုသူတွေ အနေနဲ့ မိမိ password ရွေးချယ်တဲ့ အခါမှာ အကောင်းဆုံးနည်းကတော့ အက္ခရာ အကြီး အသေး ၊ ဂဏန်း၊ special character( ဥပမာ !@#%^&*)တို့ ကို ရောစပ်ပြီး အနည်းဆုံး (၈) လုံးထားပေးသင့်ပါတယ်.။-
7/14/2012 02:10:00 PM
ပထမဆုံး ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုကတော့ ရာစုနှစ်ဝက်ခန့် ကျင့်သုံးခဲ့တဲ့ ဗဟိုဦးစီးအုပ်ချုပ်မှု စနစ်အောက်က ရုန်းထွက်ပြီး ရင့်ကျက်ခိုင်မာတဲ့ ဒီမိုကရေစီ စနစ်သို့ ကူးပြောင်းနိုင်ဖို့ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာ ဒီမိုကရက်တစ် အလေ့အထတွေ ကွယ်ပျောက်နေခဲ့တဲ့ ကျွန်တော်တို့ နိုင်ငံနဲ့ ပြည်သူတွေအတွက် ကြီးမားတဲ့ စိန်ခေါ်မှု ကြီးဘဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အမေရိကန်-အာဆီယမ် စီးပွားရေး ဖိုရမ်တွင် နိုင်ငံတော် သမ္မတ ဦးသိန်းစိန် ပြောကြားသည့် မိန့်ခွန်းမှ ကောက်နှုတ်ချက်
7/14/2012 11:23:00 AM